अपरिचित रहँदाका अनुभूति- विविधा - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २१, २०७६ अजय दीक्षित
नयाँ स्थानमा बस्दाको एउटा फाइदा अपरिचित रहन पाउनु रहेछ । कसैले चिन्दैनन् । स्कुलको जीवनपछि पहिलोपल्ट ‘हाफ प्यान्ट’ लगाएर मर्निङवाकमा निस्कन थालेको छु, नयाँदिल्ली छेउको सहरमा । पानी पर्ने समय हो, निकास पर्याप्त नहुँदा केही बेरको वर्षाले सडक जलमग्न हुने गर्थ्यो, खोलासरह केही दिन अघिसम्म ।
यस वर्ष बाढीले भारत र नेपालमा विपद् ल्यायो । नियमित त्रासदी हो– बाढी, उद्धारका कथा छन्, तर उपयुक्त व्यवस्थापनको सम्भावना हराए सरह छ । पीडाका कथा दोहोरिन्छन्, सहर, गाउँ दुवैतिर ।
केही दिनयता तापक्रम ३४ डिग्री पुगेको छ, तर गर्मी ४२ डिग्री पुगेको जस्तो अनुभव हुन्छ ।फ्ल्याटमा एसी छ, चिसो पार्छ । एसीको चिसो पार्ने पदार्थ आफैं हरितगृह ग्यास हो, एसीले तातो फाल्छ बाहिर । बिजुलीको खर्च माथि लान्छ । काठमाडौंमा पनि दिउँसो एकदम गर्मी हुनथालेको छ, फोनमा खबर पाउँछु । बढ्दो वायुमण्डलीय वाफ र तापक्रमसित अनुकूल रहनु ठूलो चुनौती हुनेछ ।
बढ्दो तापक्रमको कारण मानवीय क्रियाकलापले वायुमण्डलमा कार्बनडाइ अक्साइड बढाएकोेले हो ।
ढोकाभित्र बनेका आकाश छुने सरहका घरहरू छन् । फ्ल्याटहरूमा व्यक्ति, परिवारहरू छन्, तर समुदायको अनुभूति भएको छैन । सहरी जीवनको पर्याय, सबै आआफ्ना धुनमा मग्न छन् । भित्र–बाहिर आउने–जाने कार्य पहरेदारको नियमनमा छ । फाटक छेउको पहरेदार हाँस्दै सलाम बजार्छ, किन ? त्यै जानोस् । ऊसित केही आत्मीयता बढेको छ । बताउँछ, ‘सबै गाउँतिरबाट आएका हुन् ।’ हाम्रा सिमानातिरका छन् र हाम्रैतिरका पनि ।
छेउमा टांगिएको सूचना पाटीमा लेखिएको छ, ‘घरपालुवा कुकुरलाई पटी (दिसा) गराउन निषेध गरिएको छ ।’ केही अगाडि डोरीमा बाँधिएका दुई ल्याब्राडोर हिँड्दैछन्, घरायसी सहयोगीसित । अमेरिकामा घर धनी नै प्लास्टिकको थैला लिएर पटी सोहर्दै हिँड्थे, यता जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरिएको छ । हाम्रोतिर बाटोमा पटी नगराउने संस्कार अझै आएको छैन ।
अगाडिको राजमार्गमा गाडी, ट्याक्सी, टेम्पो, मोटरसाइकल र रिक्सा दगुरेको दगुर्‍यै छन्, तर साइकल त्यति देखिँदैनन् । ट्याँट्याँ, टुँटुँटुँटुँ कस्तो हल्ला । काठमाडौंमा हर्न बज्न कम भएको त्यस्तै बानी परेछ । राजमार्गका बीचमा हेमानका यामानका कंक्रिटका थामा छन्, त्यसमाथि हेमानका यामानका बिम, स्ल्याब र माथि रेलका पटरी । हरेक दुई/दुई मिनेटमा मेट्रोरेल घुरर–घुरर यताउता गरिरहन्छ, झन्डै ६० प्रतिशत सोलार प्लान्टले उत्पादन गरेको बिजुली प्रयोग गर्दै ।
दिमाग काठमाडौं पुग्छ, प्रस्तावित मेट्रोरेल, मोनोरेल अनि सहरी तार बाटोका संकथनतिर पुग्छु, रेलका गफगाफ सम्झन्छु । लौ, चीनको फलानो गाउँसम्म रेल आइपुग्ने भयो, अब हिमालय यताको पालो, चिनियाँले गरिदिहाल्छन् । गत मेमा बेइजिङमा चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सका प्राज्ञहरूलाई सोधेको थिएँ, ‘हाम्रोतिर चीनले नेपालमा सबैथोक गरिदिन्छ भन्छन् नि, के हो ?’
प्राज्ञहरूले हाँस्दै कूटनीतिक भाषामा जवाफ दिएका थिए, ‘गर्ने त तपाईंहरूले हो, आफ्नै मिहिनेतले, हाम्रो सहयोग रहनेछ ।’
गुजरातमा पानी व्यवस्थापन अध्ययन गर्ने क्रममा त्यहाँका सहकर्मी मित्रले भनेका थिए, ‘अजय भाइ केही वर्षपछि अहमदावाद र मुम्बै बुलेट ट्रेनले जोडिन्छ ।’ मेरो जवाफ थियो, ‘गज्जव, आउनेछु यात्रा गर्न, टिकट तपाईं किनिदिनुहोला ।’ सन् १९७० को दशकको तुलनामा भारतको रेलसेवा व्यवस्थापन स्तरीय छ ।
यताका ट्राफिक पनि त्यति व्यवस्थित छैन, तर हाम्रोतिरको स्तर योभन्दा तलै हुनुपर्छ । एकतर्फी, जथाभावी दाहिने मोड्न प्रतिबन्ध, लेन ड्राइभिङ र ट्राफिक लाइटले काठमाडौंको यातायात केही व्यवस्थित हुन्थ्यो । तर खोइ के हो, खालि रुख काट्ने, सडक विस्तार गर्ने प्रस्तावमात्रै गरिन्छ, राज्यको तर्फबाट ।
काठमाडौंमा त्यसो हुन नदिऊँ भन्दै युवा पुस्ताको सानो टोली लागिपरेको छ । सन् १९७० मा गढवालमा ग्रामीण महिलाहरूले रुख र जङ्गल बचाउन रुखमा टाँसिएर चिप्को आन्दोलन सुरु गरेका थिए । नेपाली युवा पुस्ताले त्यस्तै आन्दोलन सुरु गर्ने भन्दैछन् । आशा गरौं, यो प्रयास सेल्फी खिच्नमा सीमित हुने छैन ।
हरियो/परियो मास्नेमात्रै होइन, तिनका ठाउँमा कंक्रिटका फलफूल, रुख, गाई इत्यादि बनाउने हुटहुटी चलेको छ, हाम्रो नेपालमा । कंक्रिटका गाई बनाउने मनस्थितिको परिणति होला, भिरबाट जिउँदा गाईलाई धस्काइदिएका । जे गरे पनि भइहाल्छ । कसले के गर्छ भन्ने आवरणमा गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा । एकदिन कंक्रिटका नदी निर्माण गरिएको हेर्न तयार बसेको छु ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास बैंकले ऋण दिइहाल्छन्, कसैले डिजाइन तयार गर्ने छ, अनि निर्माण गर्ने ठेकेदार भइहाल्छन् । छापाहरूमा चट्ट परेका तस्बिर आइहाल्छन् । लौ, विकास भइहाल्यो । पुर्खाले वर्षौं अघि सिर्जना गरेका सम्पदा अझै जिउँदैछन्, तर हिजोआज गरिएका कंक्रिटका निर्माण एकजुनी पनि टिक्ने छैनन्, नत कुनै विदेशी पर्यटक हेर्न आउनेछन् । पुर्खा कलाकारका परिकल्पना र सीप सम्झँदा आदर र श्रद्धाले शिर निहुरिन्छ ।
अरुणदेव अलिक माथि आइपुगिसकेका छन् । फ्ल्याटमा फर्कन्छु । केही बेरपछि ल्यापटप खोल्छु, मेल हेर्छु र ट्विटरमा पुग्छु । आक्कल–झुक्कलट्विट गर्छु, सार्वजनिक चासोका विषयमा । लाइक गर्छु, रिट्विट पनि । हल्लामा हराए सरह हुन्छु । मनले भन्छ– भँडास छताछुल्ल पार, तर दिमाग रोक्छ । भँडास नपोख, कसैको हित हुँदैन ।
लामो सास लिन्छु र आफैंलाई भन्छु, सूचनाको स्रोत हो, तत्अनुरुप प्रयोग गर्नु उचित । युट्युबतिर पुग्छु, अचम्म पर्नुदेखि केही रहन्न, कति हल्ला छन् त्यहाँ । आफ्नै मुलुकमा लठ्ठीले कुटी–कुटी कुकुर मारेको हृदयविदारक दृश्य हेर्न पुगियो । कसैले ‘फेक’ हो भनिदेओ न, प्लिज । कस्ता हिंस्रक प्रवृत्ति रहेछन्, हाम्राकोमा ।
ल्यापटप बन्द गर्दै साइबर विश्वबाट निस्केर मस्तिष्कलाई ब्रह्माण्डको अनन्त यात्रामा छाडिदिन्छु । टेक्सास राज्यको सहर एलपासोमा रोकिन्छ, मस्तिष्क । त्यस सहरमा एउटा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्द गोली चलाएर २२ जनाको ज्यान लियो । भोलिपल्ट ओहायो राज्यमा अर्को सन्काहाले गोली चलाएर १० जना निर्दोषको ज्यान लियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘बन्दुक राजनीति’ बुझिनसक्नु । हामी संवेदना प्रकट गरौं, नहोस्, नदोहोरियोस् भन्ने कामनासहित ।
निदानको जिम्मा अमेरिकीहरू र तिनका चुनिएका प्रतिनिधिहरूको हो । सन् २००२ मा एलपासो सहरको सिमानाको अनुभव सम्झँदा अहिले डर लाग्छ । पारी मेक्सिकोको ह्वारेज सहरबाट एलपासो फर्कने क्रममा अमेरिकी सिमाना अध्यागमनले निकै बेर केरकार गरेको थियो, मल्टी एन्ट्री भिसा भए पनि । सातोपुत्लो गएको अवस्था थियो ।
दक्षिण एसियामा सिमाना स्पष्ट थिए, अब झन् घनिभूत पारिएको छ : जम्मु–कश्मीर र लद्दाख । विवादित छ, निर्णय । विवादमा भूगोल, इतिहास, उपनिवेश, स्वतन्त्रता, धर्म/आस्था, भूराजनीति, सुरक्षा, संविधानवाद, प्रजातन्त्र, सूचनाको हक, मानव अधिकार, विस्थापन, राष्ट्रवाद सबै समेटिएको छ–स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा । अगाडिको यात्रा कस्तो होला ?
सन् २००५ को भूकम्पपछि इस्लामावादबाट झेलम नदीको किनार हुँदै मुजफ्फरवाद पुगेको थिएँ । विश्वको सबैभन्दा बढी सैनिकीकरण भएको क्षेत्र । भारत र पाकिस्तान दुवैपट्टि अस्त्रशस्त्र लैस सैनिक दस्ता छन् । भारतका दस्तामा नेपाली युवा पनि । युद्ध विभीषिकाको कल्पनाले थररी भएको थिएँ ।
भूकम्पले केही समय विपद्सित जुध्ने मानवीय सिर्जना र सहकार्यको बाटो खोलेको पनि थियो । पश्चिमी हिमालयमा ठूलो भूकम्प जानेछ, विज्ञहरू भन्छन् । यस्तो घटना भए मृत्यु नहोस्, विपद् निदानमा सहकार्य होस् भन्ने कामना गर्छु । वार्ता र छलफलले विवाद सुल्टने क्रम सुरु होस् । हिंसा, वेदना र पीडाका साहित्य लेख्न नपरोस् ।
आफ्नै मुलुकमा हिंसा चलेको कालखण्डमा सो नहोस् भन्ने लाखौंमध्ये म पनि थिएँ । भारत–पाकिस्तान बटवारा हुँदा भएका हिंसाका हृदयविदारक घटनालाई कथामा उतारेका मन्टोका केही कथा नेपालीमा अनुवाद गरेको पनि हुँ । एउटा सार्वजनिक विन्तीपत्र थियो त्यो, तर हिंसा रोकिएन । सन्तुष्टि लाग्छ, नहोस् भन्नेमध्ये परेकोमा । नेपालीले लेखेका हिंसा नहोस् भन्ने मन पोल्ने कथा छन्, भविष्यमा पनि लेखिनेछन् ।
केहीपछि शान्ति आयो । हिंसाको क्रम फेरि केही समय चल्यो । हिंसाको कुरा गर्छन्, एकथरी । दुई वर्षअघि वासिङ्टनमा आयोजित द्वन्द्व र विकास सम्बन्धी एउटा सम्मेलनमा पहिलोपल्ट भाग लिने मौका मिलेको थियो । नेपाल फेरि हिंस्रक द्वन्द्वको चपेटामा फँस्ने हो भने समृद्धि, विकास र मध्य आम्दानीवाला मुलुक बन्ने सपना बिर्से भयो । त्यस्तै बुझेको थिएँ, सम्मेलनपछि । सबै नेपाली हार्नेछन्, कसैको पनि जित हुने छैन ।
सिमानाभित्र हामी सबै जडसूत्रमा रुंगिएका छौं । विद्वान सर्वत्र पुज्यते भनिन्थ्यो, ज्ञान सर्वमान्य हुनछाडेको अनुभूति हुन्छ । कसको ज्ञान, केका आधारमा ? ज्ञानको राजनीति पहिले पनि हुन्थ्यो, सामाजिक सञ्जालको कालखण्डमा सो नहुने कुरै भएन । गुटबाजीमा विवेक धुजाधुजा परेको छ । कित्तामा खण्डित विवेक एवं विधि र तौरतरिकाको ह्रास सामुहिक विचलनको संकेत हो ।
विश्व उथल–पुथलमा छ । कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तन, आणविक युद्धको त्रास, बढ्दो आर्थिक असमानता, सामाजिक सञ्जालको ब्यापकता, असहिष्णु बन्दै गरेका राज्य व्यवस्था । सन् १९५० पछि स्थापित विश्व संस्थागत व्यवस्थाहरू ह्रासोन्मुख र अनिश्चितताको घेरामा छन् । कस्ता बाटा रोजिएला ? विगतबाट कस्ता पाठ सिकिएला ? शासन पद्धतिको गन्तव्य के होला ? स्पष्ट जवाफ छैनन् ।
वास्तविकता के हो भने प्रत्येक सिमानाभित्रका पृथ्वीका सबै बासिन्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिम र जैविक विविधता ह्रासले ल्याउने चपेटामा परिसकेका छौँ । कार्बनडाइ अक्साइडको मात्रा झन्डै ४१५ पीपीएम पुगेको छ । उत्सर्जन तत्काल कम हुने बाटो देखिँदैन । बढ्दो क्रमको परिणाम के होला ? विवेक पुर्‍याउन नसके मानवजाति नै मासिन सक्छ, तर सम्भावना सम्झनु जरुरी मानेका छैनौं, बालुवामा टाउको लुकाएको सुतुरमुर्ग सरह छौं । ‘मैले देखेको छैन, समस्या भए पनि गैहाल्छ ।’
अल्पविकसित मुलुकबासी एक अध्येताको सीमित परिधि बुझेको छु । तथापि चेतनाको दीयो बाल्ने यज्ञमा चरु होम्न नछोड्न स्वर्गिय कवि सिद्धिचरण प्रेरणा दिइरहन्छन् ।
सागरको बीच आइसकेपछि भयले अब हट्न हुँदैन,
आँधी आई कुर्ले कुर्लोस्, अब हिम्मत हार्न हुँदैन ।
डुब्ला, मर्ला अरू के होला, यत्ति न हो त्रास तँलाई,
लाखाँ मर्छन्, लाखाँ डुब्छन्, जगको रीत चलाउनलाई ।
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७६ ०८:३६
भाद्र २१, २०७६ रेबेका स्कार्ग हेर्सवर्ग, ड्यानियल टी विलिङहाम
जब दुईवर्षे बच्चा कुनै सामान्य विषयलाई लिएर रुन्छ, तब अभिभावकले के गर्नुपर्छ ? प्रायः सबैको मनमा आउने पहिलो कुरा– ‘फोटो खिच्ने, रमाइलो क्याप्सन राख्ने र इन्स्टा वा फेसबुकमा अपलोड गर्ने ।’ सार्वजनिक रूपमा आफ्नो बच्चाको तनावलाई हाँसोको विषय बनाउने कुरा सबैले आत्मसात मात्रै गरेका छैनन्, यसलाई उत्तिकै प्रोत्साहित पनि गरेका छन् ।
विभिन्न वेबसाइटले ‘बेस्ट अफ कम्पाइलेसन’ भनेर शीर्षक नैछुट्याएका हुन्छन् । त्यस्ता फोटो वा भिडियोको अगाडि लेखिएको हुन्छ– ‘मेटालिका ह्याज न्यु लिड सिंगर ।’
मनोवैज्ञानिक र एउटा अभिभावकको हिसाबमा हामी सबै बच्चाले देखाउने स–साना व्यवहारमा हाँस्छौं र त्यो क्षणलाई सबैको साझा बनाइहाल्छौं । तर के त्यो सही हो त ?
सामान्यतया हँसिमजाकले एउटा उद्देश्य परिपूर्ति गर्छ– त्यसले नकारात्मक भावना जस्तै– लाज वा तनावबाट मनोवैज्ञानिक रूपमा टाढा राख्छ । कुनै एउटा कलेज जहाँ १०५ जनाह्विलचेयर प्रयोगकर्ता विद्यार्थी अध्ययन गर्थे, तिनीहरूमा गरिएको अध्ययन अनुसार पिसाब वा दिसा सम्बन्धी ठट्टाले उनीहरूको तनावलाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्न मद्दत गर्छ । एकजना सहभागीले भने, ‘हामी आफैंलाई ठट्टाको पात्र बनाउँछौं, किनभने त्यसले हाम्रो जीवनलाई केही सहज बनाउँछ ।’
बच्चाको रुवाइ सुनेसँगै अभिभावकहरू दौडादौड गर्न थाल्छन् । प्रकृतिले नै त्यो प्रोग्राम सेट गरेको छ– रक्तचाप बढ्छ । त्यो रुवाइ अरु नै बच्चाको किन नहोस् । तर बच्चालाई हानि हुने कुनै पनि कार्य भइरहेको छैन भनेर तपाईंले जब थाहा पाउनुहुन्छ, आफ्नै दिमागलाई शान्त बनाउन तपाईं मजाक गर्न थाल्नुहुन्छ ।
आफ्नो समस्याबारे एकअर्कासँग भलाकुसारी गर्दैगर्दा एउटा समूह नै निर्माण हुन्छ । एउटा पुरानो प्रयोगका अनुसार शोधकर्ताहरूले अस्पतालको एउटै वार्डमा रहेका दुई बिरामी आफ्ना समस्याबारे एकअर्कासँग धेरै ठट्टा गर्छन् । त्यो अस्पताल बसाइको डर वा आफ्नो दुःख कम गर्न हेतु हुनसक्छ । अभिभावकहरूले भने अरुको बच्चा कुनै सपिङ मलको लाइनमा छुकछुक गरेको देखेर केही सान्त्वना प्राप्त गर्छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, बच्चाका कारण दुःख पाउने उनीहरू एक्ला व्यक्ति होइनन् ।
अर्को एउटा अस्पतालमा गरिएको अध्ययन अनुसार ठट्टा गर्दा जहिले पनि आफ्नो तहको ख्याल राख्नुपर्छ । जस्तै– अस्पतालमा वरिष्ठ चिकित्सकले आफ्नो रेसिडेन्टलाई मजाकको पात्र बनाउँछन् र रेसिडेन्टले नर्सलाई । तर यसको ठिक उल्टो भयो भने त्यो पाच्य हुँदैन ।
अर्को एक पुरानो प्रयोगले ठट्टामा आवेगको पनि भूमिका हुन्छ भनेर पुष्टि गरेको छ । एउटामा प्रयोगकर्ता कुनै व्यक्तिसँग झर्किएर र कसैसँग सामान्य रूपमा कुरा गर्छिन् । र पछि झुक्किएझैं गर्दै आफ्नै लुगामा चिया पोखाउँछिन् । उनको लुगामा चिया पोखिएकोमा उनीसित झर्किएर बोलेको व्यक्ति मुस्कुराउँछ या हाँस्छ ।
तसर्थ अनलाइनमा कुनै पनि ठट्टाको भिडियो वा फोटो पोस्ट गर्नुको पछाडि केही न केही छुद्र सोच त लुकेकै हुन्छ । तर सामान्य रूपमा हेर्दा त्यो हामीलाई मजाकमात्रै लाग्छ । कुनै बच्चा आफ्नो कुकुर मरेको कारण रोयो भने त्यसलाई फकाउनैपर्छ । तर उसको ‘सिप्पी कप’मा भएको पानी धेरै तरल भयो भनेर रोयो भने के नै गर्न सकिन्छ र ? यो हाँसोउठ्दो नै हुन्छ, किनभने त्यहाँ केही गलत भइरहेको हुँदैन ।
तर २ वर्षको बच्चाको दिमागमा ती दुवै कुरा उत्तिकै हिसाबमा पीडादायी हुन्छ । उसको अगाडिको मस्तिष्क पूर्णरूपमा विकसित भइसकेको हुँदैन । तसर्थ ऊ पानी भनेको तरल नै हुन्छ र त्यसले भिज्छ भन्ने ठम्याउन सक्दैन । यस्तै अब कुकुर फर्किएर आउँदैन भन्ने पनि ऊ बुझ्दैन । त्यसैले दुवै अवस्थामा ऊ आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । उसको विरोधमा कुनै दम छैन भन्दैमा उसले महसुस गरिरहेको पीडा त घट्दैन ।
अरु कुनै व्यक्तिको तनाव तपाईंको लागि फोन झिकेर रेकर्ड गरेर ‘लाइक’ पाउने माध्यम हुनुहुँदैन । यस्तो व्यवहार झनै खराब हुन्छ, जब तपाईं आफ्नो बच्चाको बालापनको तर्क वा सोचमा अन्य कुनै व्यक्तिलाई भिडियो बनाउन दिनुहुन्छ । त्यस्तो बेला त उसलाई झन् तपाईंको साथ र माया चाहिएको हुन्छ ।
हो, बालबालिकाले आफैंलाई मजाककोविषय बनाएर हाँस्न सिक्नुपर्छ, तर त्यो पहिलो आफ्नो घरको सुरक्षित वातावरणबाट सुरु हुनुपर्छ । ती सुरुवाती पाठ भने उनीहरूलाई हानि नगर्ने र उनीहरूले बुझ्ने खालको हुनुपर्छ । तर यसो भन्दैमा उनीहरूको नखरालाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन ।
इन्स्टाग्रामको पोस्ट गरिएका फोटाहरू हेर्दा उनीहरूका हाँसो निर्दोष देखिन्छन् । यदि त्यसको भिडियो नै छ भने बच्चाले कहिल्यै हेर्दैन । अभिभावकहरूको पनि चाहना हुन्छ, तर त्यसलाई सन्तुष्ट पार्न आफ्नै बच्चालाई ‘जोकर’ बनाउनु भने हुँदैन । जब उनीहरूको ‘नखरा’ देखेर तपाईंलाई हाँसो उठ्छ, हाँस्नुको साटो तपाईं अरु कुनै कार्य गरेर आफ्नो शरीरले प्रतिक्रिया जनाउन दिएको संकेतलाई बन्द गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
आफूले बच्चा हुर्काउँदाको अनुभव अन्यसँग साट्नु गलत होइन, खालि आफ्नो अनुभव साट्ने बहानामा बच्चालाई ‘हाँसोको पात्र’ बनाउनु भएन । घरभित्र जे गरे पनि, इन्टरनेटमा भेटिने पराइले तपाईंको बच्चालाई प्रेम गर्दैन । त्यो ध्रुवसत्य हो । त्यसैले जहिले पनि बच्चासँग मिलेर हाँस्नुहोस्, बच्चाप्रति नहाँस्नुहोस् ।
लेखकहरू मनोवैज्ञानिक हुन् ।
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७६ ०८:३३